पायल्सको सबैभन्दा राम्रो उपचार पद्धति क्षारसूत्र हो | गृहपृष्ठ
Home अन्तरवार्ता पायल्सको सबैभन्दा राम्रो उपचार पद्धति क्षारसूत्र हो
on: February 01, 2019 अन्तरवार्ता
पायल्सको सबैभन्दा राम्रो उपचार पद्धति क्षारसूत्र हो
डा. अनिल कुमार चौधरी, वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्सक, जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्यकेन्द्र, बाँके
नेपालमा आयुर्वेदको इतिहास निकै लामो छ । परापूर्वकालदेखि आम मानिसले आयुर्वेदबाट उपचार गर्दै आएका छन् । देशमा आयुर्वेदिक शिक्षाको आरम्भ राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरले गरेका थिए भने आयुर्वेद चिकित्साका लागि राजा प्रताप मल्लले सिंहदरबारमा वैद्य खाना सञ्चालन गरेका थिए । नेपालमा पहिलो पटक प्राविधिक पढाइ भएको विषय नै आयुर्वेद हो । आयुर्वेदिक पद्धतिबाट सहज रूपमा उपचार हुन सक्ने एउटा रोगमा पायल्स पर्दछ । पछिल्लो समय पायल्सका रोगीहरू बढ्दै गएको चिकित्सकहरू बताउँछन् । प्रस्तुत छ, यो रोगबारे जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्यकेन्द्र, बाँकेका वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्सक चिकित्सक डा. अनिल कुमार चौधरीसँग आर्थिक अभियानका भक्तबहादुर शाहीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
पायल्स कस्तो प्रकृतिको रोग हो ?
यो खानपानको खराबीका कारण लाग्ने रोग हो । शरीरको आवश्यकता भन्दा बढी खाँदा, तनाव लिँदा तथा जीवनशैली एकनासको नहुँदा कब्जियतको समस्या हुन्छ । यो नै पछि पायल्सको कारण बन्छ । कब्जियत हुँदा दिसामा आउँ मासी देखिन्छ । पाचनक्रिया बलियो नभएका व्यक्तिलाई पायल्सले सताउने गर्छ । समयमै उपचार नगरे यसले क्यान्सरको रूप लिन सक्छ ।
पायल्स कुन अवस्थामा देखिन्छ ?
बढी चिल्लोयुक्त खाद्य पदार्थ, खसीको मासु, राज्मा, मासको दाल, मम, चाउमिन, सेकुवा, खुर्सानी, अदुवालगायतको बढी सेवनले कब्जियत हुन सक्छ । कब्जियत भएपछि बल लगाएर दिसा गर्नुपर्ने हुन्छ, जसले गर्दा मलद्वारभित्र रहेका नसा सुन्निन थाल्छन् । सुनिएका नसा मासुको डल्लोका रूपमा बाहिर आउन थाल्छन् । कहिलेकाहीँ ती डल्ला फुटेर मलद्वारबाट रगत आउने गर्दछ । यसरी बनेका मासुका डल्लालाई नै पायल्स भनिन्छ ।
पायल्सका प्रकार र लक्षण के के हुन् ?
पायल्स दुई किसिमको हुन्छ । भित्री पाइल्स र बाहिरी पायल्स । पाल्यसको अवस्था भने तीन किसिमको हुन्छ ।
१. भित्री पायल्स
भित्री पायल्समा रगत आउँछ । शुरूको स्थितिमा मलद्वारको भित्री भागमा सानो गाँठोजस्तो सुन्निएको हुन्छ, तर देखिँदैन । त्यसमा कुनै किसिमको घाउ पनि हुँदैन । दिसा गर्ने बेलामा दिसासँग रगत मिसिएर आउँछ । कोही कोहीमा दिसापछि पनि रगतका थोपा आउने गर्छ । अर्को अवस्थामा पहिलाको भन्दा भित्री भाग बढी सुन्निएको हुन्छ । दिसा गर्ने बेला बल गर्दा रगत आउनुको साथै मस्सा (डल्लो) जस्तो पनि बाहिर आउँछ । तर औंलाले ठेल्दा सजिलै भित्र जान्छ ।
तर तेस्रो अवस्थामा पायल्सको स्थिति बढो गम्भीर हुन्छ । यसमा सुन्निएको भाग या डल्लो बाहिरतिर झुन्डिएर रहन्छ । औंलाको सहायताले पनि यसलाई भित्र पठाउन सकिँदैन । यो ठूलो आकारको हुन्छ र सधैं बाहिरतिर निस्केको हुन्छ । भित्री पायल्सलाई रक्तस्रावी बाबासिर भनिन्छ । दोस्रो या तेस्रो अवस्थाको पायल्समा दिसा गरिसकेपछि कुनै पनि प्रकारको तेल लगाएर मस्सालाई भित्र ठेलिदिनु पर्दछ । बाहिर रह्यो भने संक्रमण भएर क्यान्सर हुन सक्छ ।
२. बाहरी पायल्स
यस्तो पायल्समा प्रायः दिसा गर्दा रगत आउँदैन । यसलाई मेडिकल भाषामा पेरियनल हेमाटोमा भनिन्छ । यो हेर्दा ससानो गाँठो सुन्निएको जस्तो हुन्छ । यो मलद्वारको बाहिरी सतहमा रहन्छ । यो अत्यधिक चिलाउने हुन्छ । यसमा रगत जम्मा भयो भने दुख्छ र तुरुन्तै उपचारको आवश्यकता हुन्छ ।
पायल्स हुनुका मुख्य कारण के के हुन् त ?
कब्जियत हुनु र मल त्याग गर्दा बढी बल लगाउनु पायल्सको कारण हो । गुदा मैथुन गर्दा पनि पायल्स हुन्छ । लगातार र बारम्बार पखाला लागेमा समेत पायल्स हुने सम्भावना हुन्छ । लगातार वजनदार सामग्री उठाउने, मोटो व्यक्ति र बढी बसिरहनेलाई पायल्स हुने गर्दछ । गर्भावस्थामा पनि धेरेजसो महिलामा पायल्सको समस्या देखिएका छन् ।
पायल्स निको पार्न कस्तो उपचार गर्नुपर्छ ?
यो रोगको उपचारको उत्तम उपाय आयुर्वेदको क्षारसूत्र विधि हो । पहिला आयुर्वेदिक औषधि लगायत चिकित्साबाट बिरामीलाई सञ्चो बनाउने प्रयास गरिन्छ । त्यसले सञ्चो भएन भने क्षारसूत्र विधिबाट उपचार गरिन्छ । क्षारसूत्र विधिबाट उपचार गरेपछि पुनः बिरामी हुने सम्भावना अति कम हुन्छ । खानपानमा सन्तुलन नमिलाउने १ प्रतिशत जतिमा मात्र यो रोग बल्झिन सक्छ ।
पायल्सको घरेलु उपचार के हो ?
पायल्सका रोगीहरूले रेसादार खाना खानुपर्छ । चोकर सहितको पीठोबाट बनेको रोटी, गाजर, मुला, बन्दागोभी, गहुँको दलिया बढी खानुपर्छ । खुर्सानी सेवन नगर्ने, बिहान उठेर दिसा जानुभन्दा पहिला पानी पिउने, दैनिक योगासन गर्ने, पाचन शक्तिभन्दा बढीको भोजन नगर्ने, निश्चित समयमा भोजन गर्ने बानी बसाल्नुपर्छ । चिया, दूध सेवन नगर्ने र मोहीको बढी सेवन गर्नाले पनि यसका रोगीलाई राम्रो गर्छ । पानी प्रशस्त पिउने, हरियो सागपात (काँचै समेत), फलफूल सेवन गर्ने, चोकर सहितको गहुँको पीठोबाट बनेको रोटी, जौ, ब्राउन राइस, रहर तथा मुगको दाल खाने गर्दा पायल्सले सताउँदैन ।
खानासँग मुला, काँक्रो, गाँजर खाने, नरिवल, अनार, स्याउ, बेलजस्ता फलफूल, करेला, धनियाँ, लौका खानु राम्रो हुन्छ । हरेक दिन शारीरिक व्यायाम गर्ने, आफ्नो पिसाबले मलद्वार धुने, एक गिलास गाईको दूधमा आधा कागती निचोरेर खाने गर्नुपर्छ । नरिवलको बाहिरको जटा डढाएर एक चिम्टी खरानी र दुबोको २ चम्चा रस घोलेर बिहान बेलुका एक गिलास मनतातो पानीसँग खाँदा पनि सन्चो हुन्छ ।
कसैलाई मुलाको बीउ कुटेर तोरीको तेलमा फिटेर दिसा गरिसकेपछि लगाउँदा निको हुन्छ । कसैलाई फिटकिरी एक टुक्रा राखेर १० लिटर जति पानीमा दिनको १०–१५ मिनेट बस्दा धेरै आराम मिल्छ । नियमित योग गर्दा पनि यो रोग सन्चो पाइन्छ । यो समस्याको उपचार नआत्तिईकन गर्नुपर्छ । औषधि उपचारबाट निको हुन केही समय लाग्न सक्छ । शल्यक्रिया पनि अन्तिम उपचार भने होइन । कहिलकोहीँ शल्यक्रियापछि पनि समस्या बल्झिएको र निको नभएका उदाहरण पनि धेरै छन् ।
पायल्सका बिरामीले कुन कुन चीज बार्नुपर्छ ?
पीरो, चिल्लो तथा मसला भएको खानेकुरा, माछामासु, बासी खाना, कालो दाल, अदुवा, अमिलो, चना, भन्टा, आलु, बोतलबन्द खानेकुरा, पुरानो अचार, चियाकफी, चुरोट रक्सी जस्ता चिज उपभोग नगर्ने, स्त्री सम्भोग कम गर्ने, खाली पेट नबस्ने र बिहान अबेरसम्म नसुत्ने लगायत गतिविधि नियन्त्रण गरे पायल्स हुनबाट बचिन्छ ।
यो रोग हुन नदिन अन्य केमा ध्यान दिनुपर्छ ?
स्वास्थ्यका लागि खानेकुराका फाइदा र बेफाइदाबारे जानकार हुन जरुरी छ । पायल्स मुख्यतः खानपान र वंशाणुगत कारण हुने रोग हो । तर यसका बिरामीले आत्तिनुपर्दैन । कतिपय बिरामीले यो रोगबारे खुलेर भन्दैनन् र उपचारका लागि पनि चासो दिएको पाइँदैन । त्यसैले आफ्नो समस्या नलुकाई विशेषज्ञलाई देखाउनुपर्छ । चिकित्सकीय परामर्श अनुसार उपचार गरेमा यो रोग पूर्णरूपमा निको पार्न सकिन्छ । एकपटक ठीक भइसकेपछि पनि आहार विकारमा भने सधैं ध्यान दिनुपर्छ । सन्तुलित भोजन, योग तथा ध्यान र व्यवस्थित जीवनशैली आत्मसात् गर्नाले पायल्स मात्र होइन, अन्य धेरै रोगबाट बच्न सकिन्छ ।
Ram Krishna karki
Ramro lekh raechha, sabai le manan garnu parne rahechha.
स्वाइनफ्लू लाग्दैमा आत्तिनु पर्दैन, उपचार हुन्छ